မှတ်ဉာဏ်အမြှုပ်များနှင့်အိတ်ကပ်နွေ ဦး စပ်စပ်လှိမ့်မွေ့ရာ – Baotian ပရိဘောဂကုမ္ပဏီ, Ltd.
မှတ်ဉာဏ်အမြှုပ်များနှင့်အိတ်ကပ်နွေ ဦး စပ်စပ်လှိမ့်မွေ့ရာ
တည်ငြိမ် headrest နှင့်အတူထည်အိပ်ရာအခြေစိုက်စခန်း
chaise နှင့်အတူ Placid အပြာစပျစ်သီးကို chesterfield ဆိုဖာ
ကြော့ခရမ်းရောင်ခေတ်သစ်ထည် chaise Lounge ဆိုဖာ
အိပ်ခန်းပရိဘောဂသားရေချိန်ညှိသိုလှောင်မှု function ကိုအိပ်ရာ
အိမ်တွင်းပရိဘောဂခေတ်သစ်ဒီဇိုင်း 3seater ဆိုဖာအိပ်ရာ
အိပ်ခန်းပရိဘောဂအိတ်ကပ်နွေ ဦး မှတ်ဉာဏ်အမြှုပ်မွေ့ယာ. 2.5စင်တီမီတာအေးမြဂျယ်မှတ်ဉာဏ်အမြှုပ်, အအေးအချက်၏ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်နိမ့်အပူချိန်. .02mm မီလီမီတာ ၁၈ စင်တီမီတာထိမှန်ခံနိုင်သောအိတ်ဆောင်နွေ ဦး သည်အိပ်စက်အနားယူခြင်းကိုအဆင်ပြေစေသည်။ သေတ္တာခေါင်းအုံးထိပ်နှင့်ဖက်ရှင်သောဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်ပိုက်ဒီဇိုင်း.
အမျိုးအစား: ဟိုတယ် Suite; ဟိုတယ်အခန်း;အိပ်ခန်းပရိဘောဂ
ပစ္စည်း: Spring; အထည်; Memory Foam
အသွင်အပြင်: ခေတ်သစ်; ဥရောပပုံစံ
ထုတ်ကုန်အမည်: မွေ့ရာ; Memory foam mattress; Pocket spring mattress
function ကို: Bedroom Mattress
အတိုင်းအတာ(စင်တီမီတာ): Single; Full; Queen; King; စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား(စင်တီမီတာ): Base on size
အလေးချိန်: Base on size
ငွေပေးချေမှုကာလ: T / T, 35% အပ်ငွေ, ပေးပို့ခြင်းမပြုမီချိန်ခွင်လျှာ
အာမခံချက်:2အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံနှစ်ပေါင်းအာမခံ, 1 aniline နှင့်ထိပ်တန်းစပါးသားရေအဘို့အနှစ်
လက်မှတ်: ISO9001; SGS;
1~ 3: EPE ဆိုဖာပတ်ပတ်လည်ပတ်ရစ်လျက်ရှိသည်
4~ 6: မြှုပ်မြှုပ်သောကတ်ထူပြားထောင့်နှင့်အတူထုပ်
7~ 8: ကာတွန်းစက္ကူဆိုဖာပတ်ပတ်လည်ထုပ်, အောက်ခြေအပါအဝင်
မေး: သင်ကထုတ်လုပ်သူလား၊ ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလား?
က: ကျနော်တို့ကတည်းကကူရှင်ချုပ်ထုတ်ကုန်များအတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ကြသည် 1985.
က: ကျွန်ုပ်တို့သည် ShunDe တွင်တည်ရှိသည်, ဖိုရှန်မြို့, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်
မေး:သင်၏ ၀ ယ်ယူပြီးနောက်ဘာဝန်ဆောင်မှုလဲ?
က: ကျနော်တို့ရောင်းချခြင်းခြေရာကောက်ပြီးနောက်တ ဦး တည်းအပေါ်တ ဦး တည်းရှိပါဘူး. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်အရည်အသွေးပြissueနာကနေမဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပါ, ကျနော်တို့အဖြေထွက်တွက်ဆနှင့်သင်တုံ့ပြန်ချက်ပေးလိမ့်မယ်.
မေး:မင်းရဲ့ MOQ ကဘာလဲ?
က:ကျွန်ုပ်တို့၏ MOQ သည် 40HQ သို့မဟုတ် 20GP ဖြစ်သည်(အပိုကုန်ကျစရိတ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်), သငျသညျ 40HQ သို့မဟုတ် 20GP ပေါင်းစပ်ရန်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်ရောထွေးနိုငျသညျ.
က: ဟိုတယ်စီမံကိန်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီး CA117, BS5852, BS7177, BS7176 စသည့်မီးခံပစ္စည်းများအားဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်။, နှင့် E0 / E1.
က: ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်ဆိုဖာထုတ်လုပ်နေကြသည်, ဆိုဖာအိပ်ယာ, မွေ့ရာ, လျောင်းနှင့်ထိုင်ခုံများ.
က: ဟုတ်တယ်, ကျွန်ုပ်တို့တွင် Top grain သားရေကဲ့သို့သောမတူညီသောပစ္စည်းများရွေးချယ်ရန်အရောင်မျိုးစုံရှိသည်, PVC, PU, သို့မဟုတ်ထည်.
က: ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့သိုက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်, ရက်ပေါင်း ၃၀ မှ ၃၅ ရက်အထိကြာနိုင်သည်.
က: ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များသည် SHENZHEN ဆိပ်ကမ်းသို့ FOB ဖြစ်သည်. T / T, 35% အပ်ငွေ, ပေးပို့ခြင်းမပြုမီချိန်ခွင်လျှာ.
က: မဟုတ်ဘူး, ကျနော်တို့ OEM နှင့် ODM ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်, အားလုံးထုတ်ကုန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်စိတ်ကြိုက်နေကြသည်.
က: ထည်သို့မဟုတ်သားရေနမူနာများကိုသင်ထံသို့တိုက်ရိုက်ပို့နိုင်သည်။ ODM ထုတ်ကုန်သည်နမူနာအခကြေးငွေပေးသင့်သည်, နောက်မှ 10 pcs အမှာစာနမူနာကြေးကိုပြန်ပေးမည်.
မေး: သင်၏ထုတ်ကုန်များ၏အာမခံ polity ကဘာလဲ?
က: ဆိုဖာများ၏အာမခံချက်က2အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံအဘို့အနှစ်, 1 ပြင်ပသားရေများအတွက်တစ်နှစ်; မွေ့ရာသည် 10 innerspring ဖွဲ့စည်းပုံအဘို့အနှစ်.
ဘက်စုံသုံး faux သားရေကုတင်၏အားသာချက်များ